Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny fironana amerikana napetraka dia ny hanokatra indray ny fizahan-tany manerantany tsy misy saron-tava ary tsy mifanalavitra
CDC: Ny Amerikanina vita vaksiny feno dia afaka mandeha tsy misaron-tava, manalavitra ny vatana
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny aretina dia nilaza fa ny olona vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 dia afaka manohy ny asan'izy ireo alohan'ny pandemika nefa tsy manao sarontava na mijanona 6 metatra.
Etazonia dia mety nametraka fironana manerantany ho an'ny rehetra, ao anatin'izany ny fisokafan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany
Ny Amerikanina dia afaka manohy hetsika nefa tsy manao sarontava na mijanona 6 metatra raha tsy takian'ny lalàna, lalàna, lalàna, fanjakan'ny federaly, fanjakana, faritra, foko, na faritany, ao anatin'izany ny torolàlana momba ny orinasa sy ny toeram-piasana
Raha mivezivezy any Etazonia ianao dia tsy mila mizaha toetra alohan'ny na aorian'ny dia na quarantine aorian'ny fitsangatsanganana
Etazonia dia ekena ho mpametraka fironana manerantany amin'ny lafiny maro, anisan'izany ny fizahan-tany. Mety ity no vaovao tsara indrindra hatramin'ny nanombohan'ny pendemika, fa koa ny vaovao tsara indrindra ho an'ny zotram-piaramanidina sy fizahantany.
Ny Etazonia Ivotoerana fanaraha-maso sy fiarovana (CDC) namaha ny torolàlana momba ny fanaovana masking manohitra ny COVID-19, manokatra ny lalana ho an'ny fanokafana tanteraka ny fiaraha-monina.
Araka ny fanambaràn'ny CDC androany, ny Amerikanina vita vaksiny tanteraka dia afaka mandeha tsy misaron-tava na manalavitra ny vatana amin'ny ankamaroan'ny tranga, na dia ao anaty trano na amin'ny vondrona maro aza. manokatra lalana ho an'ny fanokafana indray ny fiarahamonina.
“Raha vaksinina feno ianao dia afaka manomboka manao ireo zavatra izay najanonao noho ny areti-mandringana. Samy naniry mafy ity fotoana ity isika rehetra, raha afaka miverina amin'ny fahatsapana ara-dalàna ”, hoy ny talen'ny CDC, Dr. Rochelle Walensky, ny alakamisy teo.
Ny olona vita vaksiny tanteraka izao dia tsy mila manao saron-tava na manaraka ny halaviran'ny fiaraha-monina amin'ny toerana ivelany na anaty trano, araka ny torolàlana farany.
Misy ihany ny fanilihana ny lalàna, na izany aza, satria ny saron-tava dia mbola atolotra ho an'ny olona tsy vita volo, amin'ny orinasa mangataka azy ireo, ary koa ny hopitaly sy ny toerana hafa.
"Fotoana mampientam-po sy mahery ity, mety hitranga izany noho ny asan'ny maro izay nanao antoka fa manana fitantanana haingana ny vaksinim-piarovana telo azo antoka sy mahomby isika," hoy i Walensky.
Nanampy i Walensky fa ny Covid-19 dia "tsy azo vinavinaina" ary ny fiakaran'ny tranga hafa dia mety hanery ny CDC hanavao ny torolalana ho henjana kokoa.
"Ny taona lasa dia naneho taminay fa io viriosy io dia mety tsy ampoizina, ka raha miharatsy ny toe-javatra dia misy foana ny fotoana mety ilantsika manova ireo tolo-kevitra ireo," hoy izy.
Na ny mpanolotsaina momba ny fahasalamana ao amin'ny White House, Dr. Anthony Fauci, dia nanaitra ny sasany tamin'ny toerany milamina tampoka.
Mialoha ny fanambarana ofisialy dia nilaza i Fauci tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CBS News fa ny olona vita vaksiny tanteraka dia tsy mila manao sarontava amin'ny toerana ivelany.
"Raha sendra toe-javatra feno olona feno ianao izay tena lavo tanteraka ny olona, ​​dia misaron-tava ianao," hoy i Fauci.